Duulimaadyadii Kazakhstan ayaa la baajiyay ka dib markii mudaaharaadayaashu ay qabsadeen garoonka caalamiga ah ee Almaty
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kazakhstan » Duulimaadyadii Kazakhstan ayaa la baajiyay ka dib markii mudaaharaadayaashu ay qabsadeen garoonka caalamiga ah ee Almaty
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Kazakhstan • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Horay waxaa u soo baxayay warar sheegaya in Ciidanka Kazakhstan ay ilaalinayaan xayndaabka garoonka, waxaana baraha internetka lagu wadaagay muuqaal la sheegay in uu xirmay.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee Kazakhstan, dibadbaxayaal ka soo horjeeda dowladda ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta xarunta hawada ugu mashquulka badan ee Kazakhstan. Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Almaty, iyadoo ay socdeen mudaaharaadyo waaweyn, oo markii hore ka dhashay kor u kaca qiimaha gaaska, kaas oo aakhirkii isu beddelay kacdoon ka dhan ah dawladda.
In kasta oo wax caddayn muuqaal ah aan isla markiiba laga helin gegida dayuuradaha sababtuna tahay internet-ka oo maqan oo la sheegay in uu ka dhacayo Kazakhstan, tallada wararka ee Telegram-ka ee Orda ayaa soo xigtay Madaarka AlmatyAdeegga saxaafadda iyagoo xaqiijinaya inaysan hadda ka talin goobta.
Waxay sheegtay in kooxda warbaahintu ay xaqiijiyeen qabsashada dhismaha ee qaar ka mid ah "45 soo duulay." balse in aysan jirin wax rakaab ah oo ku sugnaa terminalka xiligaas.
Mar sii horeysay, waxaa jiray warar sheegaya in Ciidanka Kazakhstan ay ilaalinayeen Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee AlmatyWareegtada, iyo muuqaalka xarigga milateri ee lagu eedeeyay ayaa lagu wadaagay khadka. Si kastaba ha ahaatee, ilo wareedyo ka tirsan Orda ayaa ku waramaya in ciidanku ay goobta isaga tageen, isla markaana shaqaalihii garoonka ay daad gureeyeen dhammaan rakaabkii ku haray garoonka. Shaqaalihii ayaa sidoo kale la sheegay in loo daadgureeyay meel ammaan ah.
Xamuulka qaranka Ruushka Aeroflot, side Belarus belavia, iyo dhowr diyaaradood oo kale oo ka yimid dalalkii Soviet-ka ka dambeeyay ayaa joojiyay duulimaadyadii Almaty Arbacadii.
Codsiyada radar-ka ee internetka ayaa muujinaya in shirkadaha diyaaradaha ee u safraya Almaty hadda la weecinayo, iyadoo diyaaradda Rossiya oo ka timid Moscow ay koorsada u beddeshay hawada Uzbekistan iyo diyaaradda Air Astana oo ka timid Turkiga oo ka soo duushay magaalada Kazakhstan.
Xaalada muuqata ee garoonka ayaa timid kadib markii dibad baxayaasha ay xoog ku galeen hoygii hore ee madaxtooyada Almaty ka hor inta uusan dabku ka kicin dhismaha. Isagoo arrintaas ka jawaabaya, Madaxweynaha Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Nur-Sultan, ayaa wacad ku maray inuu jawaab adag ka bixin doono kacdoonka shacabka ee waddooyinka dalkaas.
"Anigoo ah madaxa qaranka iyo wixii hadda ka dambeeya anigoo ah madaxa golaha ammaanka, waxaan doonayaa inaan u dhaqmo sida ugu adag ee suurtogalka ah," ayuu yiri Tokayev.
Mudaaharaadyada ayaa ku bilowday qiimaha gaaska dareeraha ah oo si xawli ah kor ugu kacay, ka dib markii ay dawladdu meesha ka saartay qiimaha gaaska. Dalka Kazakhstan, gaaska dareeraha ah ayaa ah doorasho caan ah oo ah shidaalka baabuurta, iyo gobollada fogfog ee aan lahayn gaasta dhexe ayaa si weyn ugu tiirsan.
Ilaa hadda qalalaasaha ayaa sababay in golaha wasiirradu ay is casilaan, isla markaana ay xukuumaddu ballan qaaday in ay dib u soo celinayso xadkii qiimaha shidaalka muddo lix bilood ah.
Ilyaa wuxuu leeyahay,
Janaayo 7, 2022 markay tahay 16:49